Accueil > Gazetin'ny nosy > Karama: Niverina tapaka indray ny karaman’ireo efa tapaka tamin’ny desambra
Karama: Niverina tapaka indray ny karaman’ireo efa tapaka tamin’ny desambra
Maivan-kitsaka loatra ve ny hetsiky ny mpiasam-panjakana tapaka karama tamin’ny volana desambra dia izao anaovan’ny fitondram-panjakana rainazy izao hatrany izy ireo ? Efa tsy afaka nifaly araka izay mety mba ho tratra tamin’ny faran’ny taona ny mpiasa eo ambany fiahian’ny fanjakana efa hananika ny 10.000 isa noho ny karaman’izy ireo tapaka, ary tsy vitsy ireo voatery nisambo-bola mba hiatrehana ny adim-piainana, ka raha mba tafaverina ny an’ny maro taty aoriana, dia nivoaka indray ny vaovao omaly fa niverina tapaka indray ny karaman’ireo efa tsy nisitraka ny zony tamin’io karama io tamin’ny volana desambra.
Dia tsy menatra mihitsy ny mpitondra fanjakana amin’izany nefa ry zareo no efa niaiky fa nisy fahadisoana teo amin’ny “logiciel” nandrindra ny momba ireo mpiasam-panjakana ka niteraka an’iny fahatapahan’ny karama tamin’ny volana desambra iny.
Mifantoka any amin’ny raharaha Houcine Arfa ny ady hevitra ny olona sasany, ary mitaky ny fametraham-pialan’ny minisitra ny Fitsarana ny sokajin’olona sasany, saingy mavesa-danja kokoa noho izany izao fitohizan’ny fahatapahan-karaman’ny mpiasam-panjakana marobe izao indray. Tokony handray karama hatramin’ny omaly ny maro amin’izy ireo fa nangaihay e !
Ny any Fianarantsoa fotsiny, ohatra, ireo mpampianatra manana ny laharana “matricule” manomboka 381 no tapaka. Dia lojika ve izany ? Raha misy fifaninanana sy fanadinana aza, mba mahagaga raha hitandahatra samy ho afaka ny laharana mifanarakaraka marobe, mainka fa mpiasam-panjakana no hosokajiana ho “matoatoa” ka tapahina karama, dia milahatra ny laharan’izy ireo amin’izany.
Dia ahoana indray hoy ny mpitondra fanjakana amin’izany ?